Cancerka: Baaq horumarinta radiotherapy |
Waa Maxay Maamulka Ganacsiga Yar-Yar?|Tukesomalism.com
Cudurka Susunka: Waa Maxay Cudurka Susunku?
Cabdijabaar Sh. Axmed — October 4, 2015
Malaayiin qof adduunka ayaa u dhinta sanad walba Cancer laga hortagi karo oo lagu daawayn karo radiotherapy, sida ay sheegeen dhaqaatiirta. Tiro cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in tobankii qofba sagaal kamid ah wadamadda saboolka ah aysan heli karin radiotherapy.
Xitaa wadamadda lacagta leh oo ay adeegyada ay ka jiraan, ayaa xeeldheerayaasha ay ka digayaan inay jirto qalab yari iyo shaqaale tababaran. Ilaa 60% bukaanka Cancerka ayaa u baahan radiotherapy waqtiga daawayntooda. Waa daawo muhiim u ah dadka Cancerka qaba, oo ay ku jiraan Cancerka naasaha iyo xubnaha taranka ee raga.
Si kastaba ha ahaatee, waddammada dakhligoodu uu hooseeyo helitaanku waa uu xaddidan yahay, gaar ahaan Afrika, halkaas oo 40 waddan aysan lahayn wax goobo radiotherapy ah. Xataa waddammada dhakhligoodu sarreeyo, oo UK, Canada iyo Australia ay ka mid yihiin, tirada goobaha radiotheray, qalabka iyo shaqaalaha tababaran way ku yar yihiin, sida warbixintu sheegtay.
Guddiga oo warkan ku qoray wargeyska The Lancet Oncology, waxay sheegeen in horumarinta helitaanka radiotherapy ee bukaanka “cancer”-ka ee waddammada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhaxaadka la gaari karayo sanadka 2035 iyadoo la sameynayo maalgelin dhan 184 bilyan oo dollar.
Qiimahaas waxaa ka weynaan doonta nolosha dadka la badbaadinayo iyo waxaana ay keeni doontaa faa’iidooyin dhaqaale, ayay sheegeen khubaradu. Michael Barton, oo ah professor cilmiga Radiation Oncology (shucaac wax ku daweynta) ee jaamacadda New South Wales, waa qoraaga warbixinta oo loo gudbiyay shirweynaha.
“Ka dhigidda radiotherapy mid ay heli karaan dadka dabaqadaha kala duwan oo dhan iyo waddammada waxay keeni doontaa faa’iidooyin caafimaad oo wanaagsan si loo badbaadiyo loona horumariyo nolosha bukaanka Cancer-ka qaba iyo faa’iidooyin dhaqaale ee dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa uu meel dhexaadka yahay ee dadweynaha caalamka oo dhan” ayuu yiri.
Next post Kooxda Daacish oo mar kale ugu baaqday Al-Shabaab inay ku soo biiraan.
Previous post “Ma ahan in dowladdu caburiso Saxaafada madaxa banaan” hadalkii Maxamed C/llaahi Farmaajo